२८ बर्षपछि इंग्ल्याण्ड विश्वकपको सेमीफाइनलमा, स्वीडेन बाहिरियो ! - २८ बर्षपछि इंग्ल्याण्ड विश्वकपको सेमीफाइनलमा, स्वीडेन बाहिरियो !
२८ बर्षपछि इंग्ल्याण्ड विश्वकपको सेमीफाइनलमा, स्वीडेन बाहिरियो !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २३ असार, 04:46:12 PM
काठमाडौँ, २३ असार । स्वीडेनलाई सहजै हराउदै इंग्ल्याण्ड विश्वकप फुटबलको सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । ह्यारी केनको कप्तानीमा रहेको इंग्ल्याण्डको जितमा ह्यारी मागुइरो र डेल अलिले गोल गरे । विश्वकप फुटबलमा इंग्ल्याण्ड २८ बर्षपछि सेमीफाइनल पुगेको हो ।
यसअघि १९९० मा इंग्ल्याण्डले विश्वकपसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । त्यसबेला भर्खर जन्मेका केनले आफुलाई अब्बल प्रमाणित गर्दै रुस विश्वकपको उपाधि नजिक पुर्याउन सफल भएका हुन् ।
तुलनात्मक रुपमा कमजोर मानिएको स्वीडेन शूरुमै दबाबमा परेको थियो । इंग्ल्याण्डका ह्यारी मागुइरेले ३० औँ मिनेटमा गोल गरेर टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफ १ शुन्य गोलले पछि परेको स्वीडेन दोश्रो हाफमा पनि कमजोर नै देखियो ।
५८ औँ मिनेटमा युवा मिडफिल्डर डेल अलिले गोल गरेपछि इंग्ल्याण्डले सेमीफाइनल यात्रा तय गरेको थियो । त्यसपछि स्वीडेनले राम्रोसँग खेल्न सकेन ।
अब इंग्ल्याण्डले फाइनलका लागि क्रोएसिया र रुसबीचको विजेतासँग खेल्नेछ ।
२०७५, २३ असार, 04:46:12 PM